တတ်ချင်လျှင် သင်၊ တော်ချင်လျှင် လေ့ကျင၊့် မမှားချင်လျှင် ပြန်စစ်၊ အောင်မြင်ချင်လျှင် ဝီရိယထား။
ဘုရားရှင်တို့၏ တူညီသော အချက် ၃၀
ဘုရားရှင်တို့၏ တူညီသော အချက် ၃၀‏ ဘုရားရှင်တို့တွင် တူသော အချက်များ (၃၀) ရှိပါသည် ။
(၁) အလောင်းတော်သည် နောက်ဆုံးသောဘ၀၌ မိခင်ဝမ်းကြာတိုက်တွင် ပဋိသန္ဓေ နေတော်မူသည်။
( ဒီမှာထူးခြားတာက နတ်ပြည်ကနေ စုတေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အလောင်းတော်တွေဟာ ဗြဟ္မာပြည်ကနေ စုတေပြီး ပဋိသန္ဓေ နေတော်မူတာမျိုးမရှိပါဘူး..တဲ့ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဗြဟ္မာပြည်ကနေ လာရင် ကာမဂုဏ်ကို ရွံမုန်းတဲ့ စိတ်အထုံ လူ့ပြည်ကို ပါလာမယ် ။ အဲလိုဆိုရင်အိမ်ထောင်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အလောင်းတော်တွေဟာ ဒီလို စောစောစီးစီး ကတည်းက ကာမဂုဏ်ကို ရွံမုန်းနေရင်လည်း မဇ္စိမပဋိပဋာ လမ်းစဉ်ကို တွေ့ဖို့ခက်မယ် လို့ ဆိုပါတယ် ။)
(၂) မယ်တော်ဝမ်း၌ ထက်ဝယ်ပလ္ဘင် ဖွဲ့ခွေ၍ အရှေ့သို့မျက်နှာမူပြီးနေပါသည် ။
( အလောင်းတော်တွေဟာ သာမန်လူတွေရဲ့ သန္ဓေသားတွေလို အမိဝမ်းမှာ ပြောင်းပြန်မနေပါဘူး ။ အတည့်ပဲနေပါတယ် ။ မယ်တော်ရဲ့ ၀မ်းဗိုက်ဟာလည်း ပူထွက်လာခြင်းမရှိပါ ။ မယ်တော်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ့်သန္ဓေသားကို ကိုယ် ဗိုက်ကနေ ကောင်းကောင်းမြင်နေနိုင်ပါတယ် ။ ချဉ်ခြင်းတပ်ခြင်း ၊ နာကျင်အော့အန်ခြင်း မရှိပါ ။ အလောင်းတော်တွေဟာ မယ်တော်တွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဒုက္ခ မပေးကြပါ ။ )
(၃) အလောင်းတော်ကို မတ်တတ်ရပ်လျက် ဖွားပါသည် ။
( ညစ်ပေမှု မရှိပါ ၊ မိခင်လည်း ကျန်းမာစွာ ရှိရပါတယ် ၊ နောက် (၇) ရက်မှာတော့ မိခင် ကံတော်ကုန်ရပါတယ် ။ သကျသာကီဝင် ဆိုသည်မှာ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိသူဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် အတိုင်း မွေးပြီးပြီးချင်း ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်ပါတယ် ။
(၄) တောအရပ်၌သာ ဖွားတော်မူပါသည်။
(၅) ဖွားပြီးပြီးခြင်း မြောက်အရပ်သို. ခြေ (၇) လှမ်းကြွကာ…… “ဤလောက၌ ငါသာ အမြတ်ဆုံးတည်း ၊ ငါ၏ နောက်ဆုံး ပဋိသန္ဓေ နေရခြင်းတည်း ၊နောက်ထပ် ပဋိသန္ဓေ နေစရာ မလိုတော့ပြီ “……ဟု ကြုံးဝါးတော်မူပါသည်။
(ထိုကာလတွင် အကိုးကွယ်ခံ ဘ၀သို့ ရောက်မှန်းမသိရောက်နေသော ဗြဟ္မာတွေကို အသိပေးကြုံးဝါးခြင်း ဟု ဆို၏ ။ ဂေါတမ ဘုရားလောင်းသည် ဘ၀ပေါင်း (၃) ခု၌ ဖွားစမှာပင် စကားပြော၏ ။ မဟောသဓါ ၊ ဝေဿန္တရာ နှင့် နောင်ဆုံးဘ၀ – (သုခမှတ်စု))
(၆) သူအို၊သူနာ၊သူသေ ၊ရဟန်း နိမိတ် (၄)ပါးမြင်ပြီး ၊ သား(၁)ယောက်ဖွားသော ညမှသာ တောထွက်တော်မူကြသည်။
( ထိုနိမိတ်ပြသော နတ်သားကို ဘုရားလောင်း၏ ဆရာ ၅-ယောက်တွင် ၁-ယောက် အပါအ၀င်ဟု သတ်မှတ်ပါတယ် ။ )
(၇) အရဟတ္တဖိုလ်၏ တံခွန်ဖြစ်သော ရဟန်းအဖြစ်ကို ရယူပြီးမှ ဒုက္ကရစရိယ ကျင့်သည်။
(၈) ဘုရားဖြစ်မည့်နေ့တွင် နွားနို့ဃနာဆွမ်း ဘုန်းပေးတော်မူကြသည်။
( ထိုဆွမ်းတွင် နတ်သြဇာပါတတ်ပြီး ဘုရားဖြစ်ပြီး (၇) ပတ် ၊ (၄၉) ရက်စာ အာဟာရ ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်၏ ၀မ်းထဲတွင် အစာခြေလည်း မမြန် ၊ မြန်မြန်လည်း မဆာလောင်ဘဲ သမာပတ်ဝင်စားခြင်း ၊ တရားတော်များကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက် ကောင်းစွာ ထောက်ပံ့တယ်။ )
(၁၀) အာနပါန ကမ္မဌာန်းကို စီးဖြန်းတော်မူကြသည် ။
( ဘုရားရှင်တို့သည် အာနပါန ကမ္မဌာန်းဖြင့်သာ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကို ရရှိကြသောကြောင့် ဂေါတမ ဘုရားရှင်သည်လည်း အာနပါန ကို လွန်စွာ ချီးမွမ်းတော်မူသည်။ ပါဠိတော်တွင်လည်း -
၁/ မဟာသတိပဌာနသုတ် ( ဒီ-၂ ၊ ၃၁ )
၂/ မဟာသတိပဌာနသုတ် ( မ-၁ ၊ ၇၀ )
၃/တတိယပါရာဇိက ပါဠိ ( ၀ိ-၁ ၊ ၈၉ )
၄/ အာနာပါနဿတိ သုတ် ( မ-၃ ၊ ၁၂၂ )
၅/ မဟာရာဟုလောဝါဒသုတ် ( မ-၂ ၊ ၈၈ )
၆/ ကာယဂတာသတိသုတ် ( မ-၃ ၊ ၁၃၀ ) တို့၌ ဟောတော်မူခဲ့သည် ။
(၁၃) ဗောဓိပင်ရဲ့ ထက်ဝန်းကျင်၌သာ သတ္တ သတ္တာယကျင့်တော်မူကြပါတယ်။ (၇) ဌာနကို ပို့စ်သက်သက် တင်ထားပါတယ်…. ဒီမှာ တင်လိုက်ရင် အရမ်းရှည်နေမှာ စိုးလို့ပါ ။
(၁၄) တရားဦးဟော စိမ့်သောငှာ ဗြဟ္မာမင်းက လျှောက်ရသည် ။
( ၇ -သတ္တဟ အပြီး ၅၀-ရက်မြောက်နေ့မှာ အဘယ်သူအား တရားဟောရမည်နည်း ၊ အဘယ်သူသည် ခက်ခဲနက်နဲသော ဤတရားများကို ခေတ်ကာလ၏ အယူဝါဒများမှ ခွဲထွက်၍ လျင်မြန်စွာ နားလည်နိုင်မည်နည်း ဟု ဆင်ခြင် ကြည့်တော်မူပါတယ် ။ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကတော့ ဒီနေရာမှာ မြန်မြန်တရားထူးရမယ့် သူကို ရှေးဦးစွာ ဟောဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်တယ် ။ ဆင်ခြင်တဲ့ နေရာမှာ ဘုရားရှင်တွေဟာ ပကတိမျက်စိကိုပဲ သုံးတော်မူကြတယ်လို့ ဟောပါတယ် ။
ဘာကြောင့် ဗုဒ္ဓစက္ခု ( ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တ ၊ အာသယာနုသယ ဥာဏ် (၂)ပါး ) ကို မသုံးတာလဲ ဆိုတာ မသိပါဘူး ။ ပကတိမျက်စိနဲ့ပဲ ကြည့်တော့ ပထမမှာ ဒီလောက် ခက်ခဲနေတဲ့ တရားတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး စောစောစီးစီး တရားထူးရမယ့် သူကိုမတွေ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒီအခါ ဘုရားရှင်ဟာ မချိတင်ကဲနဲ့ တစ်လောကလုံး အန္ဓတွေကြီးပါလား လို့ ညည်းတွားတော်မူပါတယ်။ ကိလေသာထူပြောလွန်းတဲ့ လောကကို တရားမဟောတော့ဘူး၊ တစ်ကိုယ်တည်း ဖိုလ်ချမ်းသာနဲ့ နေတော့မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်အကြံလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအခါမှာ ဗြဟ္မာမင်းက တရားဦးဟောရန် လျှောက်ရပါတယ်။ ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုတော့ မဟာသဟမ္ပတိ ဗြဟ္မာမင်းက တောင်းပန်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီဃန်ိကယ် မှာတော့ ၀ိပဿီ ဘုရားရှင်လည်း ဒီလို ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ အတိအလင်းရေးထားပါတယ်။ )
(၁၇) ဇေတ၀န်မည်သော ကျောင်းတော်၌သာ သီတင်းများကြသည်။
(၁၈) သာဝတ္ထိမြို့၌ သာ ယမိုက်ပြာဋိဟာပြတော်မူပါသည် ။
( ယမိုက် + ပြာဋိဟာ = အစုံစုံ + တန်ခိုး ။ ရေအစုံ၊ မီးအစုံ ဟုဆိုအပ်သော အစုံလိုက် အစုံလိုက် ဖြစ်ပေါ်စေသော တန်ခိုးတော် )
(၁၉) တာဝတိံသာ၌သာ အဘိဓမ္မာတရားဟောပါတယ် ။
မြတ်စွာဘုရားသည် ပထမ၀ါကို မိဂဒါဝုန်မှာ ၀ါကပ်တော်မူပြီး ဒုတိယ၀ါ၊ တတိယ၀ါ၊ စတုတ္ထ၀ါတို့ကို ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၊ ပဉ္စမ၀ါကို ဝေသာလီပြည်၊ ဆဋ္ဌ၀ါကို မကုဠတောင် စသည့် နေရာဌာနများ၌ ၀ါကပ်တော်မူသည်။ သတ္တမ၀ါကို တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ ၀ါကပ်တော်မူပြီး မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် သန္တုဿိတ နတ်သားကို အမှူးထား၍ အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကို ၀ါတွင်းသုံးလပတ်လုံး အသံမစဲ ဟောတော်မူသည်။
အဘိဓမ္မာ သင်တန်းမှာ မှတ်သားမိတာကတော့ ၀ါတွင်း ( ၃ ) လ မှာ -
၂။ ၀ိဘင်္ဂ (၀ိဘင်းကျမ်း)ကို ( ၁၂ ) ရက်
၄။ ပုဂ္ဂလပညတ္တိ (ပုဂ္ဂလပညတ်ကျမ်း)ကို ( ၇ ) ရက်
၆။ ယမက (ယမိုက်ကျမ်း)ကို ( ၂၀ ) ရက်
၇။ ပဋ္ဌာန (ပဋ္ဌာန်းကျမ်း)ကို ( ၂၅ ) ရက် ဟောတော်မူခဲ့သည်။
နတ်ပြည်မှာ ဘုရားရှင် ရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားပြောနှုန်း မြှင့်ပြီးဟောလို့ရတာဟာလည်း အကြောင်းတစ်ခုလို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော် တွက်ကြည့်တာကတော့ လူ့ပြည် (၁၀၀) နှစ် = တာဝတိသာ(၁) ရက်
လူ့ပြည် (၁) နှစ် = လူ့ပြည် (၁၂) လ = တာဝတိသာ ( ၀.၂၄ ) နာရီ
လူ့ပြည် (၃) လ = တာဝတိသာ ( ၀.၀၆ ) နာရီ = တာဝတိသာ (၃.၆) မိနစ်
နတ်တွေအတွက်တော့ (၃.၆) မိနစ် ပဲကြာပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတွေ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ရေတွက်ပုံ တူရင်ပေါ့လေ။ (၆၀) မိနစ် = (၁)နာရီတွေ ဘာတွေ၊ မရှိရင်တော့ ဒီလိုတွက်လို့ မရနိုင်ဘူးပေါ့ ။ ကျွန်တော်လည်း လူ့ပြည်ရောက်တာကြာပြီဆိုတော့ မေ့ကုန်ပြီ ။( ဟီး )
(၂၂) နံနက်အခါ ၊ ညဉ့်အခါ တို့၌ ကျွတ်ထိုက်သော ဝေနေယျကို ကြည့်ရှုတော်မူပါသည်။
( နေ့ (၃) ခါ ၊ ည (၃)ခါ ..၆ ခါ ကြည့် ပါတယ် )
(၂၃) အကြောင်းရှိမှ ၀ိနည်းတရားတို့ကို ပညတ်တော်မူပါသည်။
(၂၅) ဆွေတော် ၊ မျိုးတော်တို့၏ အစည်းအဝေး တရားပွဲများတွင် ဗုဒ္ဓ၀င်ကိုသာ ဟောတော်မူကြသည်။
(၂၇) ဒါယကာတို့ ဖိတ်၍ ၀ါဆိုတော်မူသော် ၊ ၀ါကျွတ်လျှင် ဒါယကာတို့အား ပန်ကြားပြီးမှသာ ထွက်ခွာကြွသွားတော်မူကြသည်။
( ဗုဒ္ဓကိစ္စငါးပါး ။ ။
၁/ ပုရေဘတ္တကိစ္စ = နံနက်ပိုင်း၌ ဆွမ်းခံကြွတော်မူခြင်း၊ အလှူရှင် တို့အား အခွင့်အားလျော်စွာ မနုမောဒနာပြုခြင်း ကိစ္စ။
၂/ ပစ္ဆာဘတ္တကိစ္စ = နေလွဲအခါ နဲ့ ညနေပိုင်း၌ ပူဇော်ရန်လာသူတို့၏ အပူဇော်ခံပြီး သင့်တော်သော တရားဟောခြင်းကိစ္စ။
၃/ ပုရိမယာမ ကိစ္စ = ညဉ့်ဦးယံ၌ ရဟန်းတို့အား တရားဟောခြင်း၊ကမ္မဌာန်းပေးခြင်း စသော ကိစ္စ။
၄/ မဇ္စိုမယာမကိစ္စ = သန်းခေါင်ယံ ၌ စကြာဝဠာ တိုက်တစ်သောင်းမှ လာရောက်ကြကုန်သော နတ်၊ဗြဟ္မာတို့၏ အမေးပုစ္ဆာပြဿနာတို့ကို ဖြေဆိုတော်မူခြင်းကိစ္စ။
၅/ ပစ္ဆိမယာမ ကိစ္စ = မိုးသောက်ယံ ၏ ၃ ပုံ ၊ ၁ ပုံ တွင် – ပထမတစ်ပုံ၌ စင်္ကြံကြွတော်မူခြင်း ၊ ဒုတိယတစ်ပုံ၌ သီဟသေယျဖြင့် လက်ယာနံတောင်း လျောင်းစက်တော်မူခြင်း၊ တတိယအပုံ၌ မဟာကရုဏာဖြင့် စတုတ္ထဈာန်သမာပတ်ကို ၀င်စားတော်မူ၍ ထိုကရုဏာသမာပတ်မှ ထတော်မူသောအခါ (အရုဏ်တက်ခါနီး) ယနေ့ ချွတ်ထိုက်သော သတ္တ၀ါကို ဗုဒ္ဓစက္ခုဖြင့် လောက(၃)ပါးကို ကြည့်တော်မူခြင်း ကိစ္စ ။
သုတ်သီလက္ခန် အဌကထာ – မှ )
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်မှ သဘောကျ၍ ကူးယူထားသည်။
Posted by တက္ကသိုလ်စာသင်သား at 21:43 1 comment:
ဖတ်ဖူးတွေ့ဖူးခဲ့သော မနုသီဟစာ ၊ပုံများကို ၁၉၈၁၊ သြဂုတ်လ၊ ရှုမ၀ တွင် ကိုအေးမြင့်ရေးခဲ့ဖူးပါသည်။ မူလအစ ကလျာဏီကျောက်စာကဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သော်ငြားလည်း မနုသီဟ ရုပ်များ အထူးသဖြင့် ပန်းရံ၊ပန်းတော့ ၊ ပန်းတမော့ ရုပ်များဖြင့် ခေတ်စားခဲ့သည်မှာ အမရပူရခေတ်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အကြီးဆုံးနှင့် အချို့ကျဆုံး မနုသီဟရုပ်များကိုအမရပူရ တောင်သမန် ကျောက်တော်ကြီး(မဟာသကျရံသီ၊ ၁၈၅၀ ခုနှစ်)တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပုဂံမင်းသည် အမရပူရခေတ် နောက်ဆုံး(၆) နှစ်တွင် နန်းစံခဲ့သည်။ အပျော်အပါးများသော မင်းငယ်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အောက်ခြေ စီမံသူ ပညာရှင်များ တော်ခြင်းကြောင့် ထိုတောင်သမန်ကျောက်တော်ကြီးနှင့်အတူ မနုသီဟ (၁၂) အပါအ၀င် ပန္နက်ပုံ ကောင်းလှသည်။ သူ၏ဘေးတော် ပဒုံမင်း၏ မင်းကွန်းစေတီတော်ကြီး ဗိသုကာစနစ် မကောင်းသမျှ ဤတောင်သမန် ကျောက်စာတော်ကြီးဗိသုကာစနစ်ကောင်းမွန်လှ၍ စံထားမိပါသည်။ မနုသီဟ ဖင်နှစ်ခွဖြစ်နေခြင်းမှာ (ထောင့်) နေရာ၌ လိုက်လျောစေလိုသော ဒီဇိုင်းအယူအဆအရ ဖြစ်ရသည်ဟု သုံးသပ်ထားပါသည်။အထက်ပါ အကြောင်းအရာတို့ကို ထောက်ထားကြည့်ပါက သာသနာပြုမထေရ်တို့ လူသားများအတွက် အန္တရာယ်မကျရောက်စေလိုသောကြောင့် ဘီလူးဘေးကင်းဝေအောင် မနုသီဟ ဖင်နှစ်ခွပုံစံကို ဖန်တီးပေးခဲ့ဖူးသည်။
ထို့ကြောင့် လူသားများသည် ဘုရားပုထိုးစေတီအချို့ရှေ့က မနုသီဟ ဖင်နှစ်ခွကို မြင်ကြသောခါ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်သည့် သဘောဖြင့် ထုလုပ်ပြသထားတာပါလားဟု မှတ်ယူကြစေခြင်းငှာ ဤဆောင်းပါးကို ရှာဖွေစုဆောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသတည်း...........
M.A - KELANIYA UNIVERSITY SRI-lANKA,
M.A -MAGADH UNIVERSITY INDIA ,
PH.D THESIS - INDIA
bhavaalin@gmail.com / http://goodbrother-goodbrother.blogspot.com/
Posted by တက္ကသိုလ်စာသင်သား at 05:13 1 comment:
............ဘုရားရှေ့က ခြင်္သေ့ရုပ်က ဒီလိုပါ..........
Posted by တက္ကသိုလ်စာသင်သား at 08:02 1 comment:
ဘုရားရှေ့က ဟင်္သာရုပ်က ဒီလိုပါ..အပိုင်း( ၃)
ယခု စာရေးသူ ဆက်လက်တင်ပြသွားမည့် စာသားလေးက .ဘုရားရှေ့က ဟင်္သာရုပ်က ဒီလိုပါ..အပိုင်း( ၃) ကို ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်း (၁) တွင် ဟင်္သာအကြောင်းကို ထည့်ပေးလိမ့်မည်ဆိုပါက ယခုတင်ပြသွားမည့် ဆောင်းပါးကလည်း များလွန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့် ဟင်္သာအကြောင်းကို အပိုင်း(၁ )တွင် ထည့်မပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်၊ စာပေကို ချစ်ခင်သူများ ၊စာဖတ်သူမိတ်ဆွေများ စာကိုအများကြီး တပြိုင်နက် တင်လိုက်ပေးလိုက်ပါက စာဖတ်ချင်သဖွယ်မဖြစ်ဘဲ ပျင်းသွားမှာ စိုးရိမ်သည့်အတွက် နည်းနည်းစီ ပိုင်းလျက် တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဆောင်းပါးသည် အတုယူစရာ ကျင့်သုံးလိုက်နာစရာ များစွာပါသည့်အတွက် အပိုင်း(၁)နှင့် အပိုင်း (၂) ဆက်စပ်ပြီး အပိုင်း (၃) ကိုပို၍ ဘ၀သင်္ခန်းစာ ယူပြီး ဖတ်ကြရန်လည်း စေတနာထားလျက် စာပေကို မြတ်နိုးကြသော မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အား အကြံပြုလိုက်ပါသည်။
ထိုအခါ ဗာရာဏသီမင်းကြီးက ဟင်္သာမင်းအား ( အဆွေဟင်္သာမင်း သင်၏ လျှင်မြန်ခြင်းအဟုန်ကား လေသမား လေးယောက်ပစ်လွင့်လိုက်သော မြှားလေးစင်းထက် သာလွန်သည်သာ ဖြစ်သောကြာင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းပေစွ)ဟု ချီးကျူးလိုက်သည်။
ထိုအခါ ဟင်္သာမင်းက အရှင်မင်းကြီး သတ္တ၀ါတို့၏ အာယုသင်္ခါရသည် အကျွန်ုပ်၏ မြန်ဆန်မှုအဟုန်ထက် အဆ အရာ ထောင် သိန်းမက မြန်ဆန်လွန်းလှပါသည်ဟုပြော၏ ။
သတ္တ၀ါတို့၏ သေခြင်းတရားအကြောင်းကို ဖွဲ့ဆိုထားသော စာဆိုတစ်ခုက အောက်ပါအတိုင်းစပ်ဆိုထား၏။
(လာပြီးတော့ နား ၊ မသွားသေးခင် ၊ ချိန်လေးတွင်မှ ၊ ၀န်ကျင်ဆက်နွယ်၊ နှောင်ကြိုးတွယ်ကြ ။
ပြုံးရည် ငိုမဲ့၊ ချစ်မုန်းပိုကြ၊ မလိုဒေါသ၊ လိုလောဘနှင့်၊ ဘ၀ရိပ်မြုံ၊ ကကြိုးဆုံခဲ့။
ကံကုန်မိုးချုပ်၊ လက်တွဲဖြုတ်မှ၊ သုဿာန်ဆောလျှင်၊ ခရီးနှင်သည် ၊ တို့များ ဧည့်သည်ပါတကား ) ဟူ၍ပင်ဖြစ်၏။
လောကလူသားအားလုံးတိုသည် လူ့လောကထဲ ၀ယ် ခရီးသွားနေကြသော ဧည့်သည်အဖြစ် လာရောက် နားခိုနေကြ၏။ ထိုစဉ် နေ့တစ်နေ့တာအတွက် နေထွက် နေ၀င်ရှိသလိုလူသားတို့သည်လည်း ဘ၀တစ်ခုအတွက် လွှဲရှောင်၍ မရသော လူဘ၀၏ အစမွေးဖွားခြင်းနှင့်အဆုံးသေခြင်းတရားသည် ရှိကြ၏။
လူသားတို့သည် ဘ၀၏ အဆုံးသေခြင်းသို့မရောက်ကြသေးမီ လူအမျိုးမျိုး ၊စရိုက်အမျိုးတို့ဖြင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလျက် နေထိုင်ကြရပေသည်။ ထိုအခိုက်တွင် လူသားအားလုံးတို့သည် ချစ်ခင်အကျွမ်းဝင်သူများနှင့်အဆင်ပြေပြေ ပေါင်းသင်နေရသည့်အခါ အပြုံးလေးတွေ ကိုယ်စီဖြင့် ရယ်ကြ မောကြ နှင့် ပျော်ရွှင်မှုတွေကို
ခံစားနေကြပြီး လောဘ၏ သားကောင်များဖြစ်နေကြ၏ ။ ဖြစ်နေပုံကား ဘ၀၏အဆုံးသတ်မှု သေခြင်းတရားသည် မည်သို့ပါမည်နည်းဟု မေးရလောက်အောင် ဖြစ်နေကြ၏ ။ ချစ်ကျွမ်းမ၀င်သော မုန်းသောသူများနှင့် အဆင်ပြေပြေ ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှု မပြုကြရသည့်အခါ ပြုံးရာမှမဲ့လျှက် မလိုမုန်းတီးမှု ဒေါသ၏ သားကောင်ဖြစ်နေကြပြီး
ဘ၀ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ခရီးသွားနေကြသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ဘ၀ပင်လယ်ပြင်ဝယ် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မကျေနပ်မူတွေ၊ ကလဲ့စားချေမှုတွေ၊ မေတ္တာတရားကင်းမဲ့ပြီး လုယက်မှု သတ်ဖြတ်မှုတွေနှင့်သာ ဒေါသမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်နေကြသည်။ သေခြင်းဆိုသည့်သဘောတရားများကိုပင် အောင့်မေ့ သတိရဖို့ အလွန်ဝေးစွ။ လူ့ဘ၀သည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် သတိတရားလက်ကိုင်ထားကြည့်ကြပါက ရေပွက်ပမာ ခဏတာပဲ ဟု ရုပ်တရား နာမ်တရားတို့၏ မမြဲခြင်းသဘော အစိုးမရခြင်းသဘောများကို သိကြပေလိမ့်မည်။
လောကတွင် မိုးရယ် ဆောင်းရယ် နွေရယ် ဟု ရာသီဥတု သုံးမျိုးရှိသလို လူသားတို့သည်လည်း ပထမအရွယ်၊ ဒုတိယအရွယ်၊ တတိယအရွယ် ဟု အရွယ်သုံးမျိုးရှိသည်သာတည်း။
လူသားများသည် ပထမအရွယ်တွင် ကောင်းသည်ဆိုးသည် ခွဲခြားမသိသေးသော ၇ိုးသားဖြူစင် အပြစ်ကင်းစင်သည့် ချစ်စရာကောင်းသော အသွင်သဏ္ဍာန်တို့ဖြင့် လန်းဆန်းနုပျိုနေသည်။
ဒုတိယအရွယ်တွင် ကောင်းသည်ဆိုးသည်ကို ခွဲခြားပြီး သိတတ်သော ရင့်ကျက်သည့်အရွယ်ဖြစ်သည်။
တတိယအရွယ်တွင် ဘ၀နိဂုံးအဆုံးသတ်ရန် အိုမင်းခြင်းနှင်သေခြင်းအချိန်ရောက်နေသည့် အရွယ်ဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာ သစ်ပင်တစ်ပင်မှာလည်း အရွယ်သုံးမျိုးပိုင်းခြားရပေမည်။
သစ်ပင်၏ အရွယ်သုံးမျိုးကို ရာသီဥတုသုံးမျိုးနှင့် နှိုးယှဉ်ရပေမည်။
သစ်ပင်သည် မိုးရာသီတွင် သစ်ရွက်သစ်ပွင့်သစ်ခက်ကလေးများက ငုံရာမှ ဖူး ၊ဖူးရာမှ ပွင့်ပြီး အခက်အလက်ကလေးများ ရှင်သန်ကြီးထွားလျက် စိမ်းလန်းစိုပြေသောကြောင့် ကြည့်စရာ ရှုစရာကောင်းလှပေသည်။
ဆောင်းရာသီသို့ ကူးပြောင်းလာသောအခါ သစ်ပင်၏ အခက်အလက် သစ်ရွက် သစ်ပွင့် သစ်ခက် ကလေးများက စိမ်းလန်းစိုပြေနေသောအခြေအနေမှသည် ရင့်ရော်နေသောအခြေအနေသို့ ကူးပြောင်းသွားကြသည်။
နွေဦးရာသီသို့ ကျရောက်သောခါ သစ်ရွက်သစ်ပွင့်သစ်ခက်ကလေးများက ရင့်ရော်မှုမှသည် ၀ါခြင်း ခြောက်သွေ့ခြင်းသဘောသို့ရောက်လျှက် သစ်ပင်ပေါ်မှ ကျွေကျ မြေမှာ ခကြရပြီး လူသားတွေကို တရားပြနေသယောင်ရှိနေပေသည်။
ထို့အတူ လူ့ဘ၀၏ အရွယ်သုံးပါးကိုလည်း သစ်ပင်၏ သစ်ရွက်သစ်ပွင့် သစ်ခက်ကလေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက တရားသံဝေဂ ပွားစရာကောင်းလှပေသည်။မိုးရာသီတွင် သစ်ပင်၏ သစ်ရွက် သစ်ပွင့် ကလေးများက စိမ်းလန်းစိုပြေသည့်အချိန်အခါသည် လူဘ၀၏ ပထမအရွယ် ကောင်းသည်ဆိုးသည်ကို မသိသေးဘဲ အပြစ်ကင်းစင်နေသည့် ချစ်စရာကောင်းသော အရွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင် သစ်ပင်၏ သစ်ရွက် သစ်ပွင့် ကလေးများသည် စိမ်းလန်းစိုပြေနေရာမှ ရင့်ရော်သော သဏ္ဍာန်သို့ ပြောင်းလွဲသွားသလို လူဘ၀၏ ဒုတိယ အရွယ်သည်လည်း ရင့်ရော်သော ဘ၀သို့ရောက်ကြရသည်။
နွေရာသီတွင် သစ်ပင်၏ သစ်ရွက် သစ်ပွင့်ကလေးများက ၀ါခြင်း ခြောက်သွေ့ခြင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလွဲပြီး နောက်ဆုံးကျွေကျ မြေမှာခသွားကြရသကဲ့သို့
လူဘ၀၏ တတိယအရွယ်တွင်လည်း ရင့်ရော်ခြင်းသို့ ရောက်ခြင်းမှသည် အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ နောက်ဆုံး သေခြင်း သဘောသို့ ဆိုက်ရောက်ကြရမည်။
သေခြင်းတရားဆိုးကား မျက်စိတမှိတ် လျပ်တပျက်အတွင်း ရောဂါအမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် သေနိုင်သည်။ လူသားတို့၏ ရုပ်တရား နာမ်တရား အာယုသင်္ခါရကား သေပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် သုဿာန်သင်္ဂြိုင်းဝယ် မြေကြီးသာဖြစ်ကြရမည်။ ဟင်္သာမင်းသည် လူဘ၀၏ မမြဲခြင်း သေခြင်း သဘောတရားတို့ကို ကောင်းစွာသိ၏။ ထို့ကြောင့် ဗာရာဏသီမင်းကြီးအား သတ္တ၀ါတို့၏ ရုပ်တရားနာမ်တရားတို့သည် ဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းနောက်ဆုံး သေခြင်းသဘောသို့ဆိုက်ရောက်ကြရမည်။ ကြောက်စရာ တရားသံဝေဂ ရစရာကောင်းလှ၏ ဟု တ၇ားစကား ပြောကြားခဲ့ဖူး၏။
စာရေးသူသည် ဤ ဇာတ်တော်ကို ကိုးကားလျှက် စေတီ ဘုရားပုထိုးများရှေ့တွင် ဟင်္သာရုပ်များကို ထုလုပ်လျှက်ပြသထားသည်ဟု ဆိုချင်ပါသည် ။ ယင်းဟင်္သာရုပ်ကိုမြင်ကြသူတိုင်းသည် ဟင်္သာရုပ်ကို မြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ဟင်္သာမင်းသည် ဗာရာဏသီမင်းအား သေခြင်းတရားမြန်ဆန်ပုံကတရားသံဝေဂရစေခဲ့၏။ ထို့အပြင် လူသားအားလုံးသည်လည်း ဘုရားရှေ့တွင် ထုလုပ်ပြသထားသော ဟင်္သာရုပ်ကို မြင်လိုက်သောအခါ ငါတို့အား လူဘ၀၏ သေခြင်းတရားမြန်ဆန်ပုံကို ဟောပြပေးနေသလိုပါလားဟု အောင့်မေ့နှစ်လုံးသွင်းရပေမည်။ လူသားအားလုံးသည် သေခြင်းတရားနှင့်ရင်ဆိုင်နေပါလား ဟု တရားသံဝေဂရပါစေခြင်းငှါ ဘုရားရှေ့တွင် ဟင်္သာရုပ်ကို ထုလုပ်ပြသထား၏။
ထို့ကြောင့် စာရေးသူသည် ဘုရားရှေ့ကဟင်္သာရုပ်က သေခြင်းတရား၏ မြန်ဆန်ပုံကိုပြသပေးနေသည့်အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း၏ နှလုံးသားထဲ၌ အော်...........
(.ဘုရားရှေ့က ဟင်္သာရုပ်က ဒီလိုပါလား )ဟု တရားသံဝေဂ ယူကြပါစေခြင်းအကျိုးငှာ ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသတည်း။။။။။။။။။။
လူ့ဘ၀ကား တိုတောင်းလှသည်။ အသက် (၅၀) ရှိသူသည် အသက်( ၂၀) ပြန်ဖြစ်ချင်သော်လည်း ဖြစ်၍ မရ၊
ယနေ့ထက်စာရင် နက်ဖန် သေဘို့ရန် တစ်ရက်နီးလာပြီး။ ဒုက္ခနှင့်ကြုံမှ နောင်တရခြင်းသည် အကျိုးမများ၊
ထို့ကြောင့် ယခု မိမိပိုင်ဆိုင်ထားသော အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကို ကောင်းသောအကျင့်တွေနဲ့ အမြဲတမ်းအစားထိုးပြီး ဘ၀သင်္ခန်းစာကိုယ်စီနှင့် လမ်းလျောက်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by တက္ကသိုလ်စာသင်သား at 08:36 1 comment:
ဘုရားရှေ့က ဟင်္သာရုပ်က ဒီလိုပါ..အပိုင်း( ၂)
ယခု စာရေးသူ ဆက်လက်တင်ပြသွားမည့် စာသားလေးက .ဘုရားရှေ့က ဟင်္သာရုပ်က ဒီလိုပါ..အပိုင်း( ၂) ကို ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်း (၁) တွင် ဟင်္သာအကြောင်းကို ထည့်ပေးလိမ့်မည်ဆိုပါက ယခုတင်ပြသွားမည့် ဆောင်းပါးကလည်း များလွန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်
ဟင်္သာအကြောင်းကို အပိုင်း(၁ )တွင် ထည့်မပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်၊ စာပေကို ချစ်ခင်သူများ ၊စာဖတ်သူမိတ်ဆွေများ စာကိုအများကြီးတပြိုင်နက်
တင်လိုက်ပေးလိုက်ပါက စာဖတ်ချင်သဖွယ်မဖြစ်ဘဲ ပျင်းသွားမှာ စိုးရိမ်သည့်အတွက် နည်းနည်းစီ ပိုင်းလျက် တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဆောင်းပါးသည် အတုယူစရာ ကျင့်သုံးလိုက်နာစရာ များစွာပါသည့်အတွက် အပိုင်း(၁)နှင့် အပိုင်း (၂) ဆက်စပ်ပြီး ဖတ်ကြရန်လည်း
စေတနာထားလျက် စာပေကို မြတ်နိုးကြားသော မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အား အကြံပြုလိုက်ပါသည်။
ဘာသာတရားကို အလေးထားကြသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသည် စေတီများ၏ ရှေ့တွင် ဟင်းသာရုပ်များကို တွေ့ဘူး မြင်ဘူးကြပေလိမ့်မည်။
တချို့သည် ဟင်္သာရုပ်ထားရခြင်းအကြောင်းကို သိကြသူများရှိသလို မသိကြသေးသူများလည်းရှိကြသည်။
မသိသေးသူများအတွက် ဗဟုသုတအလို့ငှာလည်းကောင်း၊ သိပြီးသော သူများအတွက်လည်း ပြန်ပြီးမှတ်မိပါစေခြင်းငှာလည်းကောင်း ရေးသားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါ၏။
တချိန်က ဗာရာဏသီပြည် ဗြဟ္မဒတ်မင်းအုပ်ချုပ်နေစဉ် ဘုရားအလောင်းတော်သည် ဇ၀နဟင်္သာမင်းဖြစ်၍ အခြံအရံဖြစ်သော ဟင်္သာအပေါင်း ကိုးသောင်းအား
အကြီးအမှူးပြု၍ နေလေ၏။ ဟင်္သာမင်းတွင် ညီငယ်နှစ်ကောင်လည်းရှိသေး၏။ တနေ့တွင် ညီငယ်နှစ်ကောင်သည် သူတို့၏ အစွမ်းအစကို သိလိုသောကြောင့်
နေမင်းနှင့်အပြေးပြိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး အစ်ကိုကြီးဖြစ်သော ဟင်္သာမင်းထံ သွားရောက်၍ ခွင့်ပြုရန်တောင်းပန်ကြ၏။
ထိုအခါ ဟင်္သာမင်းသည် သတ္တ၀ါတို၏ ခွန်အားသည် အကျိုးများသည့်နေရာများတွင်သာ အသုံးပြုသင့်သည် ။ အသုံးမပြုသင်သည့်နေရာများတွင်
အကျိုးမများသောကြောင့် အသုံးမပြုသင့်ဟု စဉ်းစားလျှက် ခွင့်မပြုချေ။ သို့သော် ညီငယ်နှစ်ကောင်းသည် အစ်ကိုကြီးဖြစ်သော ဟင်္သာမင်း၏ စကားကို နားမထောင်သည့်အပြင်
နံနက်နေမထွက်ခင် ယုဂန္ဓိုရ်တောင်ထိပ်သို့ သွားရောက်ကြပြီး နေမင်းအလာကို စောင့်မျှော်လျက်နေကြ၏။ ဟင်္သာမင်းသည် ပျက်စီးကြမည့်အရေး ရင်မအေးလှသောကြောင့်
အတူလိုက်ပါခဲ့၏။ မှန်ပါသည် လောကလူသားအားလုံးတို့တွင်လည်း ခေါင်းဆောင်တို့မည်သည် သူတစ်ပါးအကျိုးစီပွားကိုသာ လိုလားကြ၏၊
သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားပျက်မည့်အရေးကို မည်သို့မျှ မလိုလားကြချေ။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူသည်လည်း ခေါင်းဆောင်တို့၏ နေရာဌာနနှင့်
မထိုက်တန်သည့် ခေါင်းဆောင်အင်္ဂါ ခြောက်ရပ်ကိုလည်း မြင်ယောင်မိပါသည်။
( ဂဏန်း၊ပုတ်သင်၊ ကိုင်းပင်၊နွားသိုး၊ လိပ်မျိုး၊ ခွေးအ ဤခြောက်ဝ နာယက မတင်ထိုက်) ဆိုသည့်အတိုင်း
၁။ ဂဏန်းကဲ့သို့ လက်မထောင်နေသော သူ
၂။ ပုတ်သင်ကဲ့သို့ သူတစ်ပါးလုပ်သမျှ ၊ပြောသမျှ ခေါင်းညိတ်တတ်သူ၊
၃။ လေလာရာယိမ်း၍ ကိုင်းပင်ကဲ့သို့ မတည်ငြိမ်သူ၊
၄။ နွားသိုးကဲ့သို့ စိတ်ဆိုးတတ်သူ
၅။ လိပ်ကဲ့သို့ ကိုယ့်ဖက်ကို ယက်တတ်သူနှင့်
၆။ ခွေးအကဲ့သို့ စားပိုးနင့်အောင် စား၍ ဇိမ်ခံတတ်သူ ဟူသော
ခေါင်းဆောင်နှင့်မထိုက်တန်သည့်သူများကိုလည်း သတိထားမိပါသည်။ ဟင်္သာမင်းသည်လည်း ယင်းခြောက်ပါးကိုရှောင်ရှားသော ခေါင်းဆောင်မျိုးဖြစ်၍သာ
ညီနောင်နှစ်ကောင်၏ ကောင်းကျိုးဖြစ်စေရန်အတွက် လိုက်သွားခဲ့သည်ဟု စာရေးသူခံစားမိပါသည်။ ထိုနည်းတူ ပြည်ပရောက် ပညာတော်သင် မြန်မာရဟန်းတော်များသည်
ဟင်္သာမင်းကို အားကျအတုယူကြလျက် သာသနာကမ္ဘာပြန့်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့် သာသနာပြုလိုကြသောဆန္ဒတို့ဖြင့် ပညာသင်ရင်း ဗုဒ္ဓစာပေများကိုလည်း
ရေးသားဖြန့်ဝေနေကြသည်မှာ များစွာရှိကြသည်ပင်။ ပညာတော်သင် မြန်မာရဟန်းတော်များသည် ဤကဲ့သို့ သာသနာပြုနိုင်ရန် ကမ္ဘာသုံးအင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကိုလည်း
အလေးထား ဆည်းပူကြရလေသည်။ လောကလူသားများ အကျိုးများစေရန်အလို့ငှာ ဆင်းရဲခက်ခဲမှုတွေရှိကြသော်လည်း ကျိုးစားပြီး ပညာသင်ခြင်းနှင့် စာပေရေးသားချင်းများကို
အထူးအားထုတ်လျက်ရှိကြပါသည်။ ပြည်ပရောက် ပညာတော်သင် မြန်မာရဟန်းတော်များသည် ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်သော ဘုရားလောင်းဟင်္သာမင်းကဲ့သို့
အနာဂါတ် သာသာနာ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်စေရန်လည်း ကြိုးစားနေကြလေသည်။
ဟင်္သာမင်းသည် ညီငယ်နှစ်ကောင်ကို စောင့်ကြည့်နေစဉ် နံနက်မိုးသောက် အလင်းရောက်သောအခါ နေမင်းသည် ထွက်ပေါ်လာချေပြီ။ ဟင်္သာမင်း၏ ညီငယ်နှစ်ကောင်သည်လည်း
နေမင်းထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် ယှဉ်ပြိုင်၍ စတင်ပျံသန်းလေတော့သည်။ ဟင်္သာမင်း၏ ညီငယ်သည် ပျံသန်း၍ မကြာမြင့်မီ အတောင်ကြားမှ မီးထတောက်သကဲ့သို့ ဖြစ်လာလေပြီ။
ဟင်္သာမင်းသည် ညီငယ်၏ အသက်ဘေးရန်ရှိလာသည်ကို သိသောကြောင့် ညီငယ်ကို အတောင်နှစ်ခုဖြင့် ပွေ့ပိုက်လျှက် ယုဂန္ဓိုရ်တောင်သို့ပြန်ပို့လိုက်သည်။
နေ့မွန်းလွဲချိန်ရောက်သောအခါ ညီလတ်ကိုလည်း ညီငယ်နည်းတူ အသက်ကို ကယ်တင်လိုက်၏။
ဟင်္သာမင်းက ငါသည်လည်း နေမင်းနှင့်အပြေးပြိုင်၍ အကျိုးမများ ပျက်စီးဘို့သာ ဖြစ်ချေတော့မည်။ ထို့ကြောင့် ဗာရာဏသီ မင်းထံသို့ သွား၍ အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်ယှဉ်သော
တရားစကားကိုဟောအံ့ ဟု အကြံထုတ်တော့သည်။ ဗာရာဏသီမင်းထံသို့ ရောက်သောအခါတွင် ငါသည် နေမင်းနှင့်အပြေးပြိုင်လာခဲ့သည့်အကြောင်း မင်းကြီးအား ပြောပြ၏။
မင်းကြီးသည် ဟင်္သာမင်းပြောသည့်စကားဟုတ်မဟုတ် လေးသမားလေးယောက်ကိုခေါ်၍ စမ်းသပ်မှုကိုပြု၏။ မင်းကြီးက ဟင်္သာမင်းအား နန်းရင်ပြင်ဝယ်ရှိသော ကျောက်တိုင်ထိပ်၌ ရပ်နေစေပြီး ၊
လေးသမားလေးယောက်ကိုလည်း နည်းတူ တိုင်သို့မှီရပ်စေ၏။ လေးသမားလေးယောက်တို့သည် များမကြာမီ အရပ်လေးမျက်နှာသို့ မြှားတွေကိုပစ်လွတ်စေသည်။
ဟင်္သာမင်းကလည်း ထိုလေးသမားလေးယောက် ပစ်လွတ်လိုက်သော မြှားတွေကို အဟုန်ဖြင့်ပျံလျက် နှုတ်သီးဖြင့် ဖမ်းယူပြီး လေးသမားလေးယောက်၏ ခြေရင်း၌ ချထားလိုက်၏။
ဟင်္သာမင်း၏ ပျံသန်းဖမ်းယူသော အခြင်းအရာကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မမြင်လိုက်ကြ။ ကျောက်တိုင်ထက်၌ ရပ်မြဲ ထင်နေကြ၏။
ထိုအခါ ဗာရာဏသီမင်းကြီးက ဟင်္သာမင်းအား ( အဆွေဟင်္သာမင်း သင်၏ လျှင်မြန်ခြင်းအဟုန်ကား လေသမားလေးယောက်ပစ်လွင့်လိုက်သော မြှားလေးစင်းထက်
သာလွန်သည်သာ ဖြစ်သောကြာင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းပေစွ)ဟု ချီးကျူးလိုက်သည်။
အပိုင်း(၃)တွင် ဘ၀သင်္ခန်းစာများ ထုတ်နှုတ်ရေးသားထားသည့်အတွက် အတုယူစရာ ကျင့်သုံးစရာ၊ သံဝေဂ ပွားစရာများ ပါသည့်အတွက် ဆက်လက်ဖတ်ပေးကြပါရန်
စာပေကို မြတ်နိုးသူများအားလေးစားလျက် ၊
Posted by တက္ကသိုလ်စာသင်သား at 03:16 No comments:
..............ဘုရားရှေ့က ဟင်္သာရုပ်က ဒီလိုပါ............အပိုင်း ( ၁ )
စာရေးသူသည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ M.A ပြီးဆုံးသောအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ (PH. D Entrance) ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး (PH.D Thesis ) ရေသားနေစဉ် သံဝေဂနှင့်စပ်သော စာမှုတစ်ခု ရေးလိုသောဆန္ဒဖြစ်လာလေသည်။ စာရေးသူလည်း စာမူအတွက် ဘယ်ကစပြီး ရေးရမှန်းမသိစဉ်းစားရခက်နေလေသည်။ ဆွမ်းစားနေနေစဉ် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပညာသင်ဖက် သူငယ်ချင်းတစ်ပါးဆီက ဟင်္သာရုပ်ကို ဘုရားရှေ့ ဘာကြောင့်ထားရသလဲ ဆိုသည့် အမေးတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရ၏။
ထိုစဉ် အာရုံထဲဝယ် အတွေးတစ်ခုဝင်ရောက်လာ၏။ စာရေးသူစိတ်ထဲတွင် စာမူတစ်ခု အတွက် ဘုရားရှေ့မှာ ဟင်္သာရုပ်ထားရခြင်းအကြောင်းကို ရေးရင်ကောင်းမယ် ဟု စဉ်းစားမိလိုက်၏။ ထို့ကြောင့် ယခုအကြောင်းအရာလေးကို ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ပရောက် အိန္ဒိယနှင့်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့၌ ပညာသင် မြန်မာရဟန်းတော်များသည် ငါတို့သည် ပညာသင်ကြားနေခြင်းကား သာသနာအတွက်သာဖြစ်ရမည်။
သာသနာသည် ငါတို့အတွက် မဖြစ်ရဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များကိုယ်စီထားကာ ခက်ခဲမှုတွေကို ဂရုမမူပဲ သာသနာအတွက် ပညာသင်ကြားနေကြ၏။
ပြည်ပရောက် ပညာတော်သင် မြန်မာရဟန်းတော်များသည် ........
(မကောင်းမြစ်ထာ၊ ကောင်းရာညွန်လစ်၊ အသစ်ဟောကြူး၊
နာဖူးထပ်မံ၊ နတ်ထံတင်ရာ။ မေတ္တာလည်းပြု၊ ရဟန်းမှု ခြောက်ခုလွန်သေချာ) ဆိုသည့်အတိုင်း
၁။ လူသားအားလုံးအပေါ် မကောင်းသည့်အရာများ တွေ့ရှိက တားမြစ်ကြခြင်း၊
၂။ ကောင်းသည့်အရာများကိုသာ ညွန်ပြကြခြင်း။
၄။ ထုတ်ဖော်ပြပြီးသော တရားများကိုလည်း ထပ်မံပြသပေးရခြင်း၊
၅။ ဒါန၊သီလ၊ ဘာဝနာတို့ဖြင့် သုဂတိဘုံဌာနတို့သို့ ရောက်ဖို့ရန် တိုက်တွန်းပေးကြခြင်း။
၆။ သတ္တ၀ါအားလုံးအပေါ် မေတ္တာအမြဲပို့လွတ်ပေးရခြင်း ဟူသော ... ရဟန်းကျင်စဉ်ခြောက်ပါးနှင့်အညီ သာသနာပြုလိုကြ၏။
ထို့ကြောင့် ပြည်ပရောက် ပညာတော်သင် မြန်မာ ရဟန်းတော်များသည် လူသားအားလုံးတို့ကို အတုယူစရာ စာပေများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း သာသနာပြုရာရောက်၏။ စာပေသည် လူသားတိုင်းအတွက် ဘ၀ကို ပုံဖော်ပေးနိုင်သည့် ဘ၀အလင်းရောင်ဖြစ်သည်။ စာပေကို ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ဘ၀တိုးတက်မှု၊အောင်မြင်မှုတွေအတွက် လမ်းပြပေးနိုင်၏။ ဘ၀လမ်းမှန်ကိုရောက်အောင် စာပေက တွန်းအားတွေပေးနိုင်၏။
ပြည်တန်ပတ္တမြားသည် လူသားတိုင်းအတွက် အဘိုးတန်ဆုံး ရတနာတစ်ပါးဖြစ်သလို စာပေဗဟုသုတသည်လည်း လူသားတိုင်းအတွက် အဘိုးတန်ဆုံးရတနာတစ်ပါးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိန္ဒိယနှင့်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့၌ ပညာသင်နေကြသော မြန်မာရဟန်းတော်များပင် ဖြစ်လင့်ကစား အဘိုးတန်ရတနာများကို ဖြန့်ဝေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်တို့ ကိုယ်စီဖြင့် ပညာသင်ရင်း အတုယူစရာ စာပေများကိုရေးသားလျက်ရှိကြပါသည်။
စာပေကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသော မိတ်ဆွေများအား ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ယခုရေးသားသော ဆောင်းပါးသည် အလွန်ရှည်သည့်အတွက် စာဖတ်သူမိတ်ဆွေများ ပျင်းသွားမည် စိုးရိမ်သောကြောင့် အပိုင်း(၁) တွင် ဟင်္သာအကြောင်းကို ထည့်မပေးပဲ အပိုင်း(၂) နှင့်အပိုင်း (၃ ) မှာသာ သင်္ခန်းစာ ယူစရာတို့နှင့်အတူ ထည့်ပေးထားပါသည်။ဆက်လက်ပြီး ဆက်တိုက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်သည့်အတွက် စောင့်မျှော်ပြီး အတုယူကျင့်သုံးလိုသောဆန္ဒတို့ဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ အပိုင်း(၂) ကို ဆက်လက်ပြီး ဆက်တိုက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်သည့်အတွက် စောင့်မျှော်ပြီး အတုယူကျင့်သုံးလိုသောဆန္ဒတို့ဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by တက္ကသိုလ်စာသင်သား at 09:51 No comments:
ဘဝ၏ နောက်ဆုံးခရီးမှာ ရွှေထီးမိုးခံရရုံမျှနှင့် သားကို ဒီဘောင်သို့ သွတ်သွင်းခဲ့ခြင်း မဟုတ်သည် ကတော့အသေအချာပင်။
မကြာသေးမီက တိုက်သစ်ဆရာတော် ရှင်ပြုတစ်ခုမှာ ဟောကြားသော “စကြာဝတေး မင်း၏ မယ်တော်ဖြစ်ဖို့ကား လွယ်ကူ၏။
ရှင်မယ်တော် ရဟန်းမယ် တော်ဖြစ်ဖို့ကား အလွန်တရာမှ ခဲယဉ်းလှစွာ၏”ဆိုသည့် တရားထဲကလို ရခဲလေတော့ ရဟန်းမယ်တော်ဆိုသည့်
အမည်ထူးတစ်လုံးကို ပန်ဆင်လိုသဖြင့်လည်း သာ၍ပင်မဟုတ်ခဲ့။ ငယ်စဉ်ကတည်းက နားစွဲနေခဲ့သော “ကိုယ်၏ သားဖြစ်စေ၊
ကိတ္တိမသား ဖြစ်စေ၊ သာသနာတော်တွင်းကို သွတ်သွင်းမှသာ” စသည်သီချင်းလို သာသနာ့အမွေခံ ဖြစ်ကာ အပယ်တံခါးပိတ်ပြီး နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့်ဖို့ရာလေ။
ဟုတ်သည်။ ခုဆို သားကို အကြောင်းပြုကာ အကုသိုလ် အထုပ်က ငယ်၍ ကုသိုလ်အထုပ်က ထည်ခဲ့ပြီကော။ ရဟန်းမယ်တော်နော် ရဟန်းမယ်တော်...
.ဆိုသောစည်းကြိုးခိုင်ခိုင်ဖြင့် ကံသုံးပါးကို စည်းနှောင်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ။ နဖူးလက်တင် စဉ်းစားမိတိုင်း ငါးပါးသော သီလ...အဲ တစ်ခါတလေ သန်းဥ စမ်းမိတာက
လွဲလို့ပါဏာတိပါတ စသောကံငါးပါးကို ခါးဝတ်လဲကဲ့သို့ မြဲခဲ့တာကို တွေ့ရတော့ “ ဒါ သားကြောင့်ပဲ...ဟုတ်တယ်။ သား ဒီဘောင်မှာ မွေ့ပျော်သ၍ နိဗ္ဗာန်တံခါးကို
မဖွင့်နိုင်တောင်မှ အပယ်တံခါးဖြင့်....”ဤလို ကြည်နူးခဲ့ရသည်။ အိပ်နိုးထတိုင်း ထိုကြည်နူးမှုလေးဖြင့် နှစ်ထောင်း ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသည်။
ခု ဤပီတိအဆောက်အအုံလေးက တုန်ခါယိမ်းယိုင်ချင်နေပြီ။ ပြိုကျ ပျက်စီး သွားဦး မှာလား။
အသက်ခြောက်ဆယ်သီသီ စွန်းခဲ့ပြီမို့ သားရဲ့ အရိပ်မှာ တစ်လှည့်ချွေးသိပ်ရင်း အဖမြတ်စွာသခင်၏ မဂ္ဂင် လမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်တော့ မည်ဟု
ကြံစည်စိတ်ကူး ရုံရှိသေး၊ ခု သားက သင်္ကန်းကြီးက သစ်ခေါက်စော်နံပြီ ဆိုတော့ ...အမေ အမေ့သား လူထွက်တော့မှာတဲ့ဗျ” “မဟုတ်က ဟုတ်က ဟယ်”“
သူ့ သူငယ်ချင်း ဦးဇင်းသိန်း ပြောတာ၊ ဦးဇင်းသိန်းကြွလာတော့ အမေ လျှောက်ကြည့်ပေါ့” ဖွဟဲ့ လွဲပါစေ ဖယ်ပါစေ။ ဒီနေ့ ဘာနေ့ပါလိမ့်၊ အင်း တနင်္လာနေ့။
တနင်္လာနေ့ ဆိုတော့ ကျွန်မသား စကား မမှန်ရာတဲ့၊ ဟုတ်တာပေါ့ ကျွန် က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င တနင်္လာနံ၊ တနင်္လာနေ့ ကြားတဲ့ စကားမမှန်ပေါ့။ မမှန် နိုင်ပါဘူး၊
မမှန်ပါစေနဲ့တော်၊ မမှန်ပါစေနဲ့။ သင်္ကန်းဆီးကတည်းက လူထွက်ဖို့ ဝေးလို့၊ တစ်ခါမျှ ရှင်လိင်တော် မပြန်ဘူးတဲ့ သား၊ ဒီသားက ရဟန်း ဝါဆယ်ဝါမျှ မြဲခဲ့သော
သင်္ကန်းကို ဖြုန်းစားကြီး ချွတ်တော့ မည်ဆိုတော့ မဖြစ်နိုင်၊ ဘယ်နည်းနှင့်မျှ မဟုတ်နိုင်။ နောက်ပြီး လူထွက်စကားလည်း တစ်ခါမျှ ရယ်စရာအဖြစ်ပင် မဟဘူးခဲ့။
အင်း ရှက်လို့ မဟတာ နေမှာ။ ဒါမျိုး ဆိုတာ ကြိတ်ကြံချင် ကြံနေမှာ။ ဦးစန္နောကြီး ကြည့်ပါလား၊ တစ်ရွာလုံးက ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်လိုက် ရတာ၊
ဣနြေ္ဒကလည်း ကြီးမှကြီး၊ ဟော ဦးဖိုးဒင် မြေးမလေးနဲ့လည်း တွေ့ရော၊ တစ်ခါတည်း အောင်ထားတဲ့ ဓမ္မာစရိယ ဆိုတဲ့ ဘွဲ့တွေတောင် မနှမြောတော့ဘူး။
ခုလဲ အဲလိုများ ဖြစ် ဟင်း...။ ကန်တော့ပါရဲ့ မောင်ပဉ္စင်းမှာလဲ ရည်းစားသနာများ တွေ့ပြုနေ.... ဟယ်.... ဟုတ်မယ် မထင်ပါဘူးလေ။
အင်း ရဟန်းတော်တွေ လူထွက်တယ် ဆိုတာလည်း တော်ရုံတန်ရုံ အကြောင်းလောက်နဲ့ ထွက်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ မောင်ပဉ္စင်းကလည်း ရုပ်လေးက မအေတူ ဖြူဖြူနွဲ့နွဲ့ရယ်။
ရွာကြွလာတဲ့အခါ ဟို ငဖုန်းရဲ့သမီးလေးနဲ့တော့ အခေါ် အပြော ရှိတာပဲ။ အဲဒီကလေးမနဲ့များ...။ ဟုတ်ချင် ဟုတ်မှာ။
ကောင်းမလေးက ကွမ်းတောင် ပန်းတောင်ကိုင်ဆိုတော့....အသက်တော့ ကွာပါတယ် လေ။ နောက်ပြီး သူတို့က ကျောင်းနေဘက်တွေပဲ၊ ဒါလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့။
ဟို သူငယ်မလေးက ဗိုင်းကောင်း ကျောက်ဖိ လေးပါ။ အင်း ...မဟုတ်ရင်တော့ ကိစ္စမရှိ၊ ဟုတ်ရင်....ဟုတ်များနေခဲ့ရင်....။
ဟိုကလေးမကို သွားမေးစမ်းကြည့်ရလျှင် ကောင်းမည် ထင်သည်။ မီးဆိုတာ မလောင်ခင် တားတာ အကောင်းဆုံး မဟုတ်လား။ သွားမေးတာတော့ ဟုတ်ပြီ။
မဟုတ်ခဲ့လျှင် သားသမီးချင်း မစာနာရာ ကျချေတော့ မည်။ဘယ့်နှယ်လုပ်ပါ့။ ကိုယ့်မောင်ပဉ္စင်းကိုပဲ သွားပင့်ခိုင်းတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပေတော့မည်။
မနက်ဖြန် အငယ်ကောင်ကို မန္တလေးလွှတ်ရမည်။ မင်း နောင်တော်ကို ပင့်ခဲ့၊ သူ့ ဆရာတော်ကိုလည်း အကြောင်းစုံ လျှောက်ခဲ့ ဟု မှာရမည်။
မောင်ပဉ္စင်းကြွလာမှ အကြိမ်များစွာ လျှောက်ခဲ့ဖူးသော စကားကို ထပ်လျှောက် ရမည်။ အကြိမ်တစ်ရာမကလို့ လည်ချောင်း လှည်းပတောင်း ထချင်ထပစေ လျှောက်ရမည်။
“လူမထွက်ပါနဲ့ ဘုရား လူ့ဘဝဆိုတာ ...”ဆံတစ်ပြည် ဘယ်ဈေး၊ ဆီတစ်ဆယ်သား ဘယ်လောက်စသည့် စားရေး အပူတွေထက်ပင် သားရေးအပူကပို၍ လောင်မြိုက်လှတော့သည်။
အရိပ်တကြည့်ကြည့်နှင့် ပျိုးထောင်ခဲ့ရသောသား ခုတော့ ....အို ... ကိုယ်ပူ ကိုယ်ကျွမ်းတာပဲ။ နောက်ပြီး မရေမရာနဲ့။ သန်ဘက်ခါ သားငယ် ပြန်လာရင် အကြောင်းစုံသိရမှာပဲဟု
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖျောင်းဖျရင်း စိတ်ကို ငြိမ်စေရ သည်။ သို့သော်....စိတ်သည် နဖားထိုးထားသည့် နွားမ တစ်ကောင် မဟုတ်လေတော့....။ မောင်းပဉ္စင်းကို မွေးတော့ သင်္ကြန်အတက်နေ့ကြီး မှာပင်။
နောက်နေ့ဆို နှစ်သစ်ကူးပြီ။ ဒီတော့ မီးတွင်းထဲ ကြာကြာ မနေလိုက်ရ။ တစ်ရက်နှင့်မီး ထွက်ခဲ့ရသည်။ အညစ်အကြေးနယ် ကြာရှည်မနေရသည့် သဘော။
ထို ကတည်းက ဒီသားဟာဖြင့် တခြားသားတွေနှင့် မတူ။ ထူးမည့်သားပဲဟု ကိုယ့်ဟာကိုယ် အတိတ်ကောက် နိမိတ်ဖတ်ခဲ့ မိသေးသည်လေ၊
နာမည်ပေးတာတောင် “မောင်ဆွေထွန်း” တဲ့။ ဆွေလယ်မျိုးလယ်မှာ ထွန်းမည့်သားလို့။ပြန်တွက်စစ်လိုက်တော့ သားတွေချည်း လေးယောက် မွေးခဲ့သည့်ထဲက မောင်ပဉ္စင်းက နို့ညှာ။
သူ့အောက် တစ်ယောက် ရှိသေးသည်။ သည်သား လေးယောက်ထဲတွင် ဉာဏ်အထက်ဆုံး သားကလည်း သူပင်။ ညည အိပ်ယာဝင် ပုံပြောပြီဆိုမှဖြင့်
သူတစ်ယောက်သာ ပုံဆုံးအောင် နားထောင် မြဲ၊ မှတ်လည်း မှတ်မိသည်။ နောက်တစ်နေ့မှာ သူ့ညီကိုပြန်ပြောနေ လိုက်တာများ ချောလို့။
ပြောစရာ ပုံသစ် မရှိသော ညများဆိုလျှင် ...“အမေ တောထွက်တဲ့ အကြောင်း ပြောပါဦး” ဟု ပူဆာတတ်သည်။ သူ တောင်းဆိုသည်က ရွာလယ်ဝတ် ကျောင်းမှာ ရွတ်ဆိုရသော
တောထွက် တော်မူခန်း ဘုရားပင့်၊ အသံနေအသံထားနှင့် ဆိုပြတာကို သူ သဘောကျသည်။ ကြားဖန်များတာကိုပင် မရိုးနိုင်၊ ရသည့် အပိုဒ်ဆိုလိုက်၍ပင် ဆိုလိုက်သေး၊
တစ်ညသားများ မှတ်မိနေ သေးတော့ “သူအိုတစ်ဖြာ သူနာတစ်တွေ.... သူသေတစ်ခန်း၊ သူရဟန်းနှင့်မဂ်လမ်း ထွင်စရာ လေးဖြာနိမိတ် နတ်ပြဟိတ်သော်ကြောင့်၊
မောင်ဆန်ကိုခေါ်၊ တိုင်ပင်တော်မူသည်မှာ ငါနှင့်အညီ ယသော် ဗျက်ဝိ တောထွက်မည့်ဟန် ငါ့အကြံကိုဧကန် မသိရှာလေဟု....။
“လောင်းမင်းသားက အဲသလို သူအိုသူနာ သူသေ ရဟန်းဆိုတဲ့ နိမိတ်ကြီး လေးပါးကို မြင်တော့ တောထွက်ဖို့ရာဖွားဘက်တော် မောင်ဆန်ကို ခေါ်ကာ တိုင်ပင်တော်မူသကဲ့ ကွယ်”
ထိုသို့ အဆို တစ်ခါ အပြော တစ်လှည့်ဖြင့် ပုံခင်းပြတုန်း ... “သူအိုဆိုတာ ဘာလဲ အမေ”
“အိုနေတဲ့ ဘိုးကြီးအို၊ မယ်ကြီးအိုတွေကို ပြောတာပေါ့ကွယ်” “ဟို...အဖေကြီး ဘိုးရွှေလုံလိုလား” “အေးပေါ့”
“သူနာကကော” “နေမကောင်းနေတဲ့သူပေါ့ သားရဲ့” “သူသေဆိုတာ ဟိုအသုဘချတာကို ပြောတာ လား” “ဟုတ်တာပေါ့ သားရဲ့”
“ဒါဖြင့် သူရဟန်းကကော” “သူရဟန်းဆိုတာက ဟို ... အဲ ... ဘုန်းကြီးကို ခေါ်တာကွယ့်” “တိုက်သစ်ကျောင်းက ဘုန်းဘုန်းလိုလား”
“ဒါပေါ့ သားရဲ့ အဲဒီ ဘုန်းဘုန်းလို” “ဘာလို့ သူက ဘုန်းကြီးလုပ်တာလဲ” “သူကလား သူက....အဲ....သူအို သူနာ သူသေမဖြစ်အောင် တရားအားထုတ်ဖို့ပေါ့ကွယ်”
“ဒါဆို သားလဲ ကြီးရင် ဘုန်းကြီး လုပ်မယ်” ကြည့်စမ်း လိမ္မာလိုက်တဲ့ သား။ ကြည်နူးလိုက်ရတာ၊ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်မည့်သူက မွေးကတည်းက ရောင်လေးနဲ့ ဆိုသလိုပင်။
ထိုညကတည်းက သားကို ရှင်ပြုပေးဖို့ အားခဲမှု ပို၍ ထက်သန်ခဲ့လေတော့သည်။ သင်္ကန်းနိုင်လျှင်ရှင်ပြု ပေးကြဖို့ သူ့အဖေနှင့် မှတ်မှတ်ရရ တိုင်ပင်ဖြစ်ကြသည်။
ရှင်ပြုတော့ မှတ်မိနေသေးသည်။ သားကြီးတွေတုန်းက ဆိုင်းနှင့် ဝိုင်းနှင့် ရှင်ပြုပေးခဲ့သည်။ အငယ်နှစ်ယောက်ကျတော့ အပျော်အပါးမဖက်၊
လောကုတ္တရာ သက်သက်ဖြစ်အောင် မနည်းတိုင်ပင်ယူရသည်။ ဒါတောင် သူ့ဒကာကြီးကအရပ်ကျေနပ်အောင် ဗြောလေး ထည့်လိုက်ချင် သေးသည်။
ဒီတော့ သိသလောက် မှတ်သလောက်နှင့်....။“ကိုယ့်နှယ် ဒီ အပိုကုန်မည့်အစား မဏ္ဍပ်ဝင် သံဃာတော်တွေကို လှူဖွယ်ဝတ္ထု ပိုလှူမယ်၊
ဒါမှ အကျိုးကြီးတော့မပေါ့တော်” စသည်ဖြင့် ဖျောင်းဖျရသေးသည်။ အဲဒီတုန်းက ကျွေးတာမွေးတာကိုပင် အမဲပေါ်ခြင်း၊ ဝက်ပေါ်ခြင်းမလုပ်စေခဲ့၊
ပံ့သကူသား ဖြစ်အောင်ငါးခြောက်ထာင်း ကြော်ကျွေးခဲ့သည်။ ငါးခြောက်မှ နိတိနတ မဟုတ်၊ ဈေးအကြီးဆုံး ငါးရံ့ခြောက်ကို ကျွေးခဲ့တာ။
ဘုန်းကြီးဖြစ်မည့် သားရဲ့ပွဲမှာအားလုံး စင်ကြယ်စေချင်သည်လေ၊ မောင်ပဉ္စင်း သင်္ကန်းဆီးတော့ ဘာရှိသေးလဲ ကိုးနှစ်သား အရွယ်လေး။
အငယ် ကောင်က ခုနစ်နှစ်၊ ရှင်တစ်ဝါနှင့် အငယ်ကောင်က ထွက်ခဲ့ပေမယ့် သူကတော့ မြဲခဲ့သည်မှာ ယခုတိုင်ပင်။
သင်္ကန်းလို သင်္ကန်း၊ ဖိနပ်လို ဖိနပ်၊ လိုရာကို လှူဒါန်းထောက်ပံ့ရင်း သာသနာ့ဘောင်မှာ ထားခဲ့ရကျိုးနပ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။
တစ်ခါမျှ လူထွက်ချင်ကြောင်း မပြောဘူးခဲ့၊ ကိုရင်လေး ဘဝနှင့်ပင် တိုက်သစ်ဆရာတော်ကျောင်းမှာ ပရိတ်ကြီး သဒ္ဒါရှစ်စောင် သင်္ဂြိုဟ်ကိုးပိုင်း ကုန်ကာ စာတွေ အတော်ရလှပြီ၊
သူ့ဆရာ ဘုန်းကြီး ပြောတာပင်အမှတ်ရ သေးတော့ ...“မယ်ရွှေကံ...နင့်သား သိပ်ဉာဏ်ကောင်းတာ၊ ကြီးရင် ဆရာတော်ဖြစ်မယ်ဟဲ့” တဲ့။
ခုတော့ဖြင့် ကြားရချက်ကမဟန်ချင် ဆတော်ဖြစ်ဖို့ နေနေ သာသာ ကျောင်းပင် မထိုင်ရသေး၊ လူထွက်တော့မည် ဆိုတော့ ... ။
သည်လိုနှင့် ဆယ့်လေးငါးနှစ်အရွယ် ကိုရင်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အရွယ်လေး ရောက်လာတော့ ကျောင်းက ကပ္ပိယကြီးနှင့် မတည့်ချင်၊
ကပ္ပိယကြီးက ဆရာတော်ကိုအပြစ်မဟုတ်တာတွေ အပြစ်လုပ်ကာ လျှောက်သည်တဲ့။ဆရာတော်ကလည်း ခဏခဏ ဆူသည်တဲ့။
အခန့်မသင့်လျှင် နကန်နှင့်ပင် အဆော်ခံရတတ်လေတော့ ကိုရင် ရွာကျောင်းမှာ မပျော်ဖြစ် လာသည်။ ဒါတောင် လူထွက်ချင်ကြောင်း လေသံမဟခဲ့။
ကိုရင့်ဒကာကြီး ကသာ စိုးရိမ်ပြီး....“ဒီမယ် ကပ္ပိယကြီး၊ ဆွမ်းကျန် ဟင်းကျန်အေးအေးစား၊ ကိုရင်ကျောင်းသား တွေကို အနိုင်မကျင့်ပါနဲ့၊
ကျုပ်သား လူထွက်လို့ကတော့ ကျုပ်နဲ့ ခင်ဗျား အတွေ့ပဲ” အဲသည်လို သွားကြိမ်းမောင်းခဲ့သည်။ တစ်သက်လုံး မော်မကြည့်ဝံ့အောင် ကြောက်ရွံ့ခဲ့ရသည့် ဆရာဘုန်းကြီးကိုပင်မမှုနိုင်အားတော့။
ခု ထိုကျေးဇူးတွေကို ဆပ်ဖို့ လူထွက်တော့မှာလား သားရယ်....။မထွက်ပါနဲ့ မောင်ပဉ္စင်းရယ် မထွက်ပါနဲ့။ အမေတို့ မောင် ပဉ္စင်းကို ဒီဘဝရောက်အောင်
ကြိုးစားပမ်းစား ခေါင်းနဲ့ရွက် တင်ခဲ့ရတာပါ ဘုရား... အဲသည်လိုကစပြီး တောင်းပန် လျှောက်ထားရမည်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ မောင်ပဉ္စင်းဘုရား၊ မောင်ပဉ္စင်း ကိုရင်ဘဝကရွာမှာ
မပျော်တော့ဘူးဆိုတော့ မြို့စာသင်တိုက်ပို့ပေးရ၊ ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ အငြို အငြင်ကိုလည်း ခံရ၊ စားရိတ်စက ထောက်ပံ့ဖို့ နွားပေါက်လေး တစ်ကောင် တောင်ရောင်းရတာတွေ
မောင်ပဉ္စင်းကို တစ်ခါမျှ အသိမပေးခဲ့ဘူး။ မဟုတ်လား။ အခုတော့ မောင်ပဉ္စင်းသိအောင် ပြောပြချင်နေမိသည်။
နောက်ပြီး တစ်ခါမျှ စိတ်ကူးနှင့်ပင် မရောက်ဖူး သည့် မြို့ကြီးသို့ ကိုရင့်ကို ဘယ်လိုမှ မလွှတ်ရက်။ လွှတ်ရမည်ကို စိတ်မချ၊ ရွာမှာ နေပြီး လူထွက် သွားမှာ နှင့်စာလျှင်
တော်လေသေးရဲ့ဆိုပြီး ဒကာကြီး၊ ဒကာမကြီးပါ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး လွှတ်လိုက်ကြခြင်းပါ။ ကိုရင် မြို့ကို သွားစရက်များကဆို ကားများ တိုက်လေမလားဟဲ့။
မြင်းလှည်းနဲ့များ ခိုက်လေမလားဟဲ့၊မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်နှင့်များ နေရှာ မလားဟဲ့ စသဖြင့် ပူပန်လိုက်ရတာ။ မန္တလေးက ဘယ်သူပြန်လာသတဲ့၊
ဘယ်ဝါ ပြန် လာသတဲ့ဆို ကိုရင်နဲ့များ မတွေ့ခဲ့ကြဖူးလားလို့ သွားမေးရတာလဲ အမော။ နောက်မှ သိရသည်။ မန္တလေးမြို့ ဆိုတာ အကျယ်ကြီးဟု။
ရွာလိုမှ မဟုတ်ဘဲ၊ တကူးတကမသွားဘဲမတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့၊ ဪသြော်... အဲဒီတုန်းကများ တပည့်တော်မ မှာ လူရယ်စရာကြီးကိုဖြစ်လို့။
ဒါတောင် မန္တလေး သွားသူကြုံတိုင်း ငါ့သားလေးဆီ ဝင်ခဲ့ကြပါဦးဟု မှာနေမိပြန်သည်။ နောက်တော့ တစ်နှစ် တစ်ခေါက်ဖြင့် ကိုရင် ပြန်ကြွလာမှာပဲလေဟု
လွမ်းစိတ်ကို ဖြေရတော့သည်။ သို့သော် ရွာက ဆရာတော် စိတ်မပြေသေးလို့လား မြို့က ဆရာတော် ခွင့်မပေးလို့လားမသိ၊ တစ်နှစ်ပတ်ပင် လည်တော့သည်။
ကိုရင်ကဖြင့် ပြန်ကြွမလာ။ ပြာသိုလ ဘုရားပွဲတော်ချိန်မှများလာ မလားပဲ။ ဟုတ်သည်။ ထိုပွဲတော်မှာ ရွာဇာတိအဝေးနေ သံဃာတွေ အကုန်ပင့်တာပဲ ဟာ... ဆိုသည့်
မျှော်လင့်ချက်နှင့် ဆက်မျှော်နေဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လာနိုး တစ်နေ့လာနိုးနှင့် ပြည် ကူးတို့ သင်္ဘောကပ်ချိန်တိုင်း မြစ်ဆိပ်က သွားကြိုနေမိသည်။ အဝတ်ကလေး
သုံးလေးထည်ကို မြစ်ရေမှာ အချိန်ကုန် အောင် လျှော်ဖွတ်ရင်း သား ကိုရင်ကို စောင့်မျှော်နေခဲ့သည့်အဖြစ်ကို မောင်ပဉ္စင်း ပြန်မြင်စေချင်လှသည်။
အဲဒီတုန်းက တစ်နေ့... နောက်တစ်နေ့... ဟိုနောက်တစ်နေ့... အဲဟို နောက်တစ်နေ့... နေ့ဆက် ထွက်မျှော်နေမိသည်။ ဘုရားပွဲတော်သာ ပြီးသွားသည်။
ကိုရင်၏ အရိပ်အရောင်ကိုကား မတွေ့ခဲ့ရ၊ နောက်ဆုံး မနေသာတော့မှ ကိုရင့်ဒကာကြီးက-“ ညည်းနှယ်အေ၊ သာထွန်းနဲ့ မန္တလေး ဘာဝေးတာ မှတ်လို့၊
တစ်နေ့ခရီးပဲဟာ၊ ညည်းသားကို တွေ့ချင်ရင်ကျုပ် လိုက်ပို့မှာပေါ့၊ အချိန်မရွေး သွားတွေ့ ရသားနဲ့ အလကား စိတ်ပင်ပန်းခံလို့၊ ညည်းသွားချင်တဲ့နေ့သာပြော”
အဲသည်က စပြီးနောက် နှစ်တွေမှာ တစ်နှစ်တစ်ခေါက်လိုလို ကိုရင့်ဆီ ရောက်ဖြစ်တော့သည်။ ကိုရင်နှင့်လည်း တွေ့ရ၊ ဘုရားစုံလည်း ဖူးရသည်မို့ ဝမ်းသာရသည်။
ကိုရင် စာတော်ကြောင်းကိုလည်း အတူနေဦးဇင်း ကိုရင် တွေထံမှ ကြားရပြန်သည်။ အဲသည်ရောက်စနှစ်က ပထမငယ်တန်းကို အောင်ခဲ့သည်။
နောက်နှစ်များမှာလည်း...မှတ်မိသေးတော့သည်။ ရောက်ဦးစ တစ်ခေါက်တုန်းက ကိုရင့်ဒကာကြီးက-
“ကိုရင် ဆွမ်းခံအိမ် ဘယ်နှစ်အိမ်ရှိလဲ၊ ဆွမ်းခံရတာ အဆင်ပြေလား” “မန္တလေးက စ ဒ ဘ ဝ နှင့် ညီမှ ဒကာကြီးရ”
“စဒဘဝဆိုတာ ဘာတုန်း ကိုရင်ရဲ့” “စဒဘဝဆိုတာ စ စောစောထပြီး၊ ဒ ဒုန်းပြေးကာ ဘ ဘုံလောင်းတိုးနိုင်မှ ဝ ဝ၀လင်လင် စားရမည်တဲ့”
ကိုရင့်အဖြေကြောင့် ရယ်လိုက်ကြရတာလေ။ ဪ သြော် ... အဲဒီတုန်းကတော့ အခုလို လူထွက်လိမ့် မည်ဟု ယောင်လို့ပင် မထင်မိခဲ့၊ ခုတော့...
ပထမကြီးအောင်သည့်နှစ်မှာတော့ ရွာကို ပြန်ကြွလာသည်။ ဒါတောင် ပဉ္စင်းတက်ရန် အသက်ပြည့် နေသော ကြောင့်သာ။ သို့မဟုတ်ရင်တော့...။
ပထမငယ်၊ ပထမလတ်၊ ပထမကြီးတန်းတွေကို နှစ်ချင်းဆက် အောင်မြင်ခဲ့လေသော ကိုရင်ဖြစ်လေတော့ ရဟန်းဒကာခံလိုသူတွေ ပေါသည်။
ဟို... ဝါးခယ်မ အောက်ပြည် အောက်ရွာက ဒကာတွေက ဒကာလုပ်ချင်၍ ရဟန်းလောင်း တောင်းသည့်တဲ့။ မပေးနိုင်ပေါင်တော်။ မပေးနိုင်ပေါင်။
သတင်းကြားကတည်းက ကိုယ်ပိုင် ပဉ္စင်းတက်ပေးနိုင်ဖို့ ခဲရသည်။ ပဉ္စင်းလောင်းဆိုတာ ပဋိသန္ဓေနေတဲ့ လရယ်၊ ဝါ ထပ်တဲ့ လတွေရယ် ပေါင်းယူရင်
ဆယ့်ကိုးနှစ်ပြည့်တာနဲ့ရဟန်းတတ်လို့ ရပြီဟု ကိုရင့် ဆရာတော်က မိန့်တော့ ဝမ်းသာ လိုက်ရတာလေ။ ကဆုန်ဆို ကိုရင်က ဆယ့်ကိုးနှစ်ပြည့်ပြီပဲ။
ထိုနှစ်မှာပင် ကိုရင်ကို ရွာသို့ ပင့်ကာ ရဟန်းခံပွဲ ကျင်းပဖြစ်သည်။ ရဟန်းခံပွဲကိုလည်း ကြည့်ပါဦး။ သိမ်ဝင်တာပင် ကုန်းသိမ်မဟုတ်၊
ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာ ရေသိမ် သမုတ်ကာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကို ကျင်းပပေးခဲ့သည်။ ဒီကျေးဇူးတွေကို ဆင်ခြင်ပြီး ငဲ့ညှာတန်ကောင်းပါရဲ့။ ငဲ့ညှာ ပါဦးဘုရား...။
အဲသည်တုန်းက သိမ်ဆင်းလောင်းလှူသွားတဲ့ လူတွေကလည်း များမှများ၊ သိမ်ဆင်းရာ မြစ်ဆိပ်မှသည် ဝါးသုံးလေးရိုက်ခန့် ဝေးရာ ကျောင်းဝရဝဏ်ဝအထိ
သိမ်ကဆင်း နို့ဖိုးဆပ် တရားဦးဟောတော့ ဝမ်းသာလိုက်ရသည့် ဖြစ်ခြင်း။ မျက်ရည်များပင် လည်လို့။ သူ့ဒကာကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနှင့်။
သာသနာ့ အမွေခံတွေ ဖြစ်ပဟဲ့... သာသနာ့ ဒါယကာတွေ ဖြစ်ပဟဲ့... ဟု ကြည်နူးအားရကြီး အားရကာ အပယ်တံခါးပိတ်၍ နိဗ္ဗာန်တံကား ဖွင့်နိုင်တော့မည်ဟု
သတ်မှတ်မိခဲ့သမျှ အင်း... ခုတော့...။
မထွက်ပါနဲ့ မောင်ပဉ္စင်းရယ် မထွက်ပါနဲ့။ တပည့် တော်မကို ငဲ့ပါဦး ဘုရားဟု ဖမိုး နဖူးချ တောင်းပန်ရမည်။ အမေကို ချစ်တဲ့သားပဲ၊ ငဲ့ညှာမည်ထင်သည်။ အဲ ... မရလျှင်တော့ ...။
အင်း... သူ့တကာကြီးသာ ရှိရင် သူလည်း ခုလိုပဲ စိတ်ကောင်းနိုင်ရှာမှာ မဟုတ်ဘုး။ သူ စောစော ကွယ်လွန်သွားတာ ကောင်းတယ်လို့တောင် ပြောရမလိုပင်၊
တမြန်နှစ်ကပင် သူ့သား မောင်ပဉ္စင်းရဲ့ လက်ပေါ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရှာပြီ။ ဘဝကူး ကောင်းမှာပါ။ ရဟန်း ခမည်းတော်ကြီး အဖြစ်နှင့် အနိစ္စ ရောက်ခဲ့ရတာပဲလေ။
ဘတော်ပျံပေါ့။ ငါ့ အလှည့်ကျရင်သာ...။ မောင်ပဉ္စင်း၏ ရွတ်သံ၊ ဖတ်သံလေးနှင့် ဘဝကူး ဖို့ရာ မသေချာတော့ပြီ။ အမေလည်း အသက်ကြီးပါပြီ။
ဒီဘုရား အရေတော်နှင့် အရိုးမထုတ်နိုင်တောင် အမေ့ တစ်သက်တော့ မထွက်ပါနဲ့ဦးလို့ နောက်ဆုံး ပြောကြည့်ရ မည်။ နေပါဦး ထွက်မယ်ဆိုတာကတော့
ကျိန်းသေလို့လား ငါ့နှယ်... ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သင်္ကန်းချည်ခဲ့တာ ပုဆိုးတောင် ကောင်းကောင်း ဝတ်တတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ လူထွက်လို့ ဘာသွားလုပ်စားမှာလဲ။
အစစအရာရာ ကျပ်တည်းတဲ့ ကာလကြီးမှာ နတ်ပြည်ကနေ ငရဲကို ခုန်ဆင်းသလို ဖြစ်တော့မပေါ့။ အို... ဒါတွေ သူစဉ်းစားမိမှာပါ။ စာတတ် ပေတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ၊
သွားပြောနေတာကမှ မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြ ဘုန်းကြီးစာချ ဖြစ်နေဦးမယ်။ ဒါတွေ တကယ် စဉ်းစားမိ လို့ကတော့ ထွက်ဖြစ်မယ် မထင်ဘူး။
ဟာ ... မစဉ်းစားမိလို့ ထွက်လည်း ထွက်ထွက် ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ သင်း ထိုက်နှင့် သင်းကံပေါ့။ ကုသိုလ်ရဖို့ကတော့ သူမရှိလဲ တခြားကိုယ်တော်တွေ ကိုးကွယ်ယုံပေါ့။
စိတ်သည် ကရုဏာ ဒေါသောတလှည့် မုဒိတာ သောကတလှည့်နှင့် ရှိသည်။ အလုပ်ဝတရားတို့ဖြင့် တည်းနှောင်ထားပါလျက်က...ထွက်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ
“ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင်” တဲ့ မောင်ပဉ္စင်း ခဏခဏ ပြောနေတာပဲ။ ဒီဒုက္ခတွေ သူသိပါတယ်။ အဲ ဒုက္ခကို သုခထင်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ သူများ တွေ့ရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။
ဟုတ်တယ်။ မြို့သူ တစ်ယောက်နှင့်များ နီးစပ်နေရော့လား။ မြို့သူဆိုတာ တောက သူငယ်မလေးတွေထက်တော့ အစစအရာရာ သာတာကလား၊
နောက်ပြီး ဆတ်ကော့လတ်ကော့နှင့် ရဲတင်း လိုက်တာကလား။ အဲဒီလို သူငယ်မနှင့်များ ငြိစွန်းနေရင်ဟယ်... ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။
ဘုရား သိကြားမလို့ မဟုတ် ပါစေနဲ့တော် မဟုတ်ပါစေနဲ့။ ဟုတ်ချင် ဟုတ်နေမှာ ဟုတ်နေရင်တော့ ထန်း လည်ဆစ်ကျိုးတဲ့... အို ငါ့သားကြီး ဒီလောက် မမိုက်ပါဘူး။
မမိုက်ဘူး... မမိုက်ဘူး။ အင်း... မြို့လွှတ်လိုက်တဲ့ အကောင်ကလည်း ကြာလိုက်တာ၊ ဒီနေ့ရောက်ရက်ပဲ၊ တစ်ညပဲ အိပ်၊
မောင်ပဉ္စင်းနဲ့ တွေ့ပြုပြီး ချက်ချင်း ပြန်လှည့်ခဲ့ဆိုတာ...။ တကတည်းတော် စူဠလိပ် ရေထဲလွှတ်သလို ဖြစ်နေပြီ။ မွန်းတိမ်းစမှာပင် မြစ်ဆိပ်ဆီမှ ပြည်ကူးတို့
သင်္ဘော၏ ဥဩဆွဲသံကို ကြားရပြီ။ ထလိုက် ထိုင်လိုက်။ မြစ်ဆီမျှော်လိုက် ငေးလိုက်နှင့် စိတ်စောလှသည်။ မကြာပါ။
“ဟော... အမေ ဟိုမှာ အမေ့သား ငကျော် ပြန် လာပြီ”သားကြီး သတင်းပေးသံ မဆုံးမီ - “အမေရေ ကျွန်တော် ပြန်လာပြီ၊ အမေ့သား ကိုယ်တော်နှင့် တွေ့ခဲ့ပါ့ဗျာ၊
ဒီနှစ် စာမေးပွဲပြီးရင် ချင်းပြည်နယ် သာသနာပြုကြွရမှာတဲ့။ မကြွခင် အမေ့ဆီ လာခဲ့ဦးမယ်တဲ့။ ဟောဒီမှာ အမေ့ဖို့ လူပျံတော်ပတမြား သွေးဆေးနဲ့စာ...
” ဆေးဘူးတွေကို မကိုင်မိ၊ စာဆီသို့ လက်လှမ်းမိသည်။ စာရွက်ခေါက်ကလေးတွေကို ထုတ်ဖြေလိုက်တော့...။
အသက်ကြီးလာလို့နဲ့ တူပါရဲ့။ လက်တွေက တုန်ချင်နေပြီ။ စာရွက်လေးတွေကို တဖျပ်ဖျပ်နဲ့...။
Posted by တက္ကသိုလ်စာသင်သား at 11:49 1 comment:
တက္ကသိုလ်စာသင်သား ဘလော့ပိုစ့်သို့လာရောက်လည်ပတ်ကြသော ချစ်သော မိတ်ဆွှေ သူငယ်ချင်းများ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဆင်မပြေတာများ ရှိခဲ့ရင်အကြံပြု စကားလေးများ ပြောကြားခဲ့ပါ အဆင်ပြေရင်တော့ ရွှေလက်ခုပ်သံလေးများ ကြားချင်ပါသည်။ အကြံပြုဝေဖန်လိုပါက bhavaalin@gmail.com ph.+919661435894 သို့ဆက်သွယ်ပါ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုလျှက်
europalace | Roulette Online | Winkbingo | soccer | MANSION CASINO
S H W E P H Y U L A Y